देउवा पछि यी मन्त्रीले गरिन विदेश गएर मुलुककै बेईजत, आखि के गरिन त्यस्तो « Naya Bato
देउवा पछि यी मन्त्रीले गरिन विदेश गएर मुलुककै बेईजत, आखि के गरिन त्यस्तो
आश्विन १२, २०७४-वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरी मैथिली राम्रोसँग बोल्छिन् । नेपाली पनि बुझ्छिन्/बोल्छिन् । अंग्रेजीचाहिँ फिटिक्कै बुझ्दिनन् । तिनै मन्त्री विदेश भ्रमण र विदेशमा अंग्रेजीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन मरिहत्ते गर्ने गरेकी छन् ।
मन्त्री बनेको दुई महिनापछि भदौमा उनी पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा थाइल्यान्ड गइन् । एसिया क्षेत्रका वातावरणमन्त्रीहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुन त्यहाँ गएकी चौधरीलाई अंग्रेजी भाषा बाधक बन्यो । ‘भाषाको समस्याले कार्यक्रमबारे बुझ्ने अवसर नै पाइनँ,’ सोमबार उनले आफ्नै कार्यकक्षमा अनुभव सुनाइन्, ‘दोभासेको सहयोग भए पनि मन्त्रीहरूको छलफलमा भाग लिन सकिनँ ।’ उनले रोमनमा लेखिएको अंग्रेजीमा मन्तव्य दिइन् । एसिया क्षेत्रका वातावरणमन्त्रीमा महिलामन्त्री उनी एक्ली थिइन् ।
ब्राजिलका बिश्वकप बिजेता रोनाल्डिन्होले लिए सन्यास
नयाँ वर्षको उत्सवमा मातेको सुरमा ट्याक्सी चढेर तीन देशको यात्रा, बिल आउँदा बेहोस !
काठमाडौं र केरुङ जोड्न सुरुङमार्गः अढाइ घण्टाभित्रै सीमापार !
काठमाण्डौँको तापक्रम दुई डिग्री भन्दा पनि कम, हिमपातको सम्भावना
अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन विदेशीको शक्ति प्रदर्शन